क्यान्सरको उपचार गर्न अमेरिका गएका बिपीको अन्तर्वार्ताको क्लिप (भिडिओ) :: Setopati
क्यान्सरको उपचार गर्न अमेरिका गएका बिपीको अन्तर्वार्ताको क्लिप (भिडिओ) ‘फर्किएँ भने मलाई मृत्युदण्ड हुन सक्छ, तर पनि म फर्कनु पर्छ’
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता एंव प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको बुधबार ३९ औं स्मृति दिवस मनाइएको छ। २०३९ साउन ६ गते उनको निधन भएको थियो।
सन् १९७७ मा बिपी घाँटीको क्यान्सरको उपचारका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका गएका थिए। क्यान्सरले बिपी गलेपछि राजा वीरेन्द्रले उनलाई उपचारका लागि अमेरिका जान अनुमति दिएका थिए।
अमेरिका घाँटीको उपचारपछि बिपी नेपाल फर्किनुअघि अमेरिकी पत्रकारहरू जिम लेहरर र रबर्ट म्याक्निलले उनको अन्तर्वार्ता गरेका थिए। उक्त अन्तर्वार्ताको क्लिप अर्थशास्त्री स्वर्णीम वाग्लेले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेका छन्।
उक्त भिडिओ क्लिपमा बिपीले आफू नेपाल फर्किनु पर्ने कारणबारे बताउँछन्।
उनी भन्छन्- मैले राजाको विश्वास राख्नुपर्छ। उनले मलाई जमानतमा छाडेका हुन्, जसको अर्थ म फर्किनु पर्छ भन्ने हो। मैले राजालाई भनेको छु- उपचारपछि म देश फर्कनेछु। जेलमा बस्नेछु र मुद्दाको सामना गर्नेछु। अर्को कुरा, मैले मेरा जनता र मेरा मित्रहरू जो प्रजातान्त्रिक अधिकारको पुनर्स्थापनाका लागि म सँगसँगै लडेका छन् उनीहरूको विश्वास पनि राख्नुछ। म नेपाल फर्किनुका यी दुई मुख्य कारण हुन्।
फर्किएर गएपछि तपाईंलाई के हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ?
मविरूद्ध सात वटा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू छन्। त्यसमा राजद्रोह र बल प्रयोग गरेर सरकार विस्थापित गर्नेलगायत मुद्दा छन्। हरेक मुद्दामा दोषी ठहर भए मृत्युदण्ड हुन सक्छ।
त्यसो भए तपाईं किन निर्वासनमा बस्नुहुन्न? तपाईंका साथीभाइ, परिवार पनि जेलमा छन्। स्वदेश फर्किनेमा किन दृढ हुनुहुन्छ?
मैले यो प्रश्नको उत्तर दिइसकेको छुजस्तो लाग्छ। हो, मेरा साथीहरू जेलमा छन्। धेरैका विरुद्द गिरफ्तारीको वारेन्ट छ। मेरो जेठो छोरो भारतमा निर्वासनमा छ। ऊ नेपाल फर्किन पाउँदैन। मेरो कान्छो छोराले पनि देशद्रोहलगायत विभिन्न मुद्दा खेपिरहेको छ। मेरी भाइ बुहारीलाई वारेन्ट छ। मेरी भान्जी पनि जेलमा छन्। उनी निर्वासनमा मसँगै नेपाल गएकी थिइन्। उनी अहिले नेपालको एकमात्र महिला राजनीतिक बन्दी हुन्।
तपाईंले नेपाल नफर्किने निर्णय गर्नुभयो भने तपाईंका समर्थकहरूले अहिलेको परिस्थिति बुझ्लान् नि?
म यहाँ बसेर मेरो स्वास्थ्यबाहेक अरू केनै गर्न सक्छु र! तर म त्यहाँ भएँ भने त्यसले राजनीतिक प्रभाव पार्छ। म फर्किएर राजबन्दी हुनु भनेको प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि भैरहेको संघर्षमा मेरो भागको योगदान गर्नु हो।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ७, २०७८, १२:१८:००